टिष्टङ नौखण्डेमा फुटबल प्रतियोगिता शुरु
खेल थाहा टाइम्स
उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ११ टिष्टुङ नौखण्डेमा दिपावलीको अवसरमा फुटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । शनिवारबाट निर्माणाधिन अष्टमान खेल मैदान तारा खोलामा दिपावलीको पुनित अवसरमा खशी उपहार फुटबल प्रतियोगिता शुुरु भएको हो ।
युथ भिजन युवा क्लव नौखण्डेको आयोजनमा भईरहेको प्रतियोगितामा ८ समूहको सहभागिता रहेको वडा अध्यक्ष किरणमान बलले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहले खशी द्धितीय हुनेले बोका र तृतीय हुने समूहले भाले पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजक क्लवले जानकारी दिएको छ ।
तस्बिर : गएको दशैमा भएको फुटबल प्रतियोगिता
रेस्पेक्ट युवा क्लबलाई शहीद सुनिता गोपाली स्मृति भलिबलको उपाधि
बागमती गोल्डकप: मकवानपुर-११ पराजित, एपीएफ विजयी
थाहानगरमा जिल्लास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता शुरु
हेटौँडामा दुई लाख ५० हजार पुरस्कार राशीकाे अन्तरशहर बुद्धिचाल प्रतियोगिता
स्थानीय तह शहीद स्मृति गोल्डकप मकवानपुरको उपाधि आर्मीलाई
मकवानपुर जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड चैत्र २७ गते देखि
बज्रवाराही माविलाई मेयरकप छात्र भलिबलको उपाधि
उपाधि जनकल्याणकै पोल्टामा [हेर्नुहोस पदक तालिका सहित]
थाहानगरमा भएको १० किलोमीटर दौडमा कार्कीलाई उपाधि
आग्राको सुन्दरीदेवीलाई थाहा नगरस्तरीय शिक्षक भलिबलको उपाधि
थाहा नगरस्तरीय महिला भलिबल टिम छनोट हुँदै [हेर्नुहोस् सूचना]
थाहामा ३१ संक्रमित थपिए, बालुवा र गिट्टी उद्योग बन्द गर्न वडाकै निर्देशन
एकै गाउँमा कोरोनाबाट १६ जनाको मृत्यु, थप भयावह हुने चेतावनी
प्रशासनको निषेधाज्ञा मिच्दै, वडाको अर्काे सार्वजनिक सूचना
पालुङमा आलु उत्पादन सुरु, असिनाको असर देखियो
थाहामा २२ संक्रमित थपिए,नगरभरि २ सय २४ पुग्यो [कुन वडामा कति ?]
बाग्मती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका १२ पुलको एकसाथ उद्घाटन
मकवानपुरको सामुदायिक वनमा मानव कंकाल भेटियो
थाहानगरमा संक्रमितको संख्या २ सय पुग्यो, निको हुने दर निकै कम
थाहामा संक्रमितकाे संख्या दुईसय नाघ्यो !
मकवानपुरमा थप एक संक्रमितको मृत्यु
थाहानगरका कोभिड बिरामीलाई एम्बुलेन्स भाडामा आधा छुट